အသက်ပြင်းပြင်းရှူကြမယ် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဟာ အသက်ရှူတာကို စောင့်ကြည့်ပြီး အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အကြာကြီး ရှူသွင်းလိုက်တာကြောင့် နှာခေါင်းကနေတစ်ဆင့် အဆုတ်ထဲကို လေတွေအပြည့် ပြည့်သွားစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပါပဲ။ နောက်ပြီး အဆုတ်ထဲကလေတွေအားလုံးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှူထုတ်ပစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အသက်ရှူသွင်းလိုက်တိုင်း ဗိုက်ဖောင်းလာပြီး ရှူထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ဗိုက်ချပ်သွားတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။
>> အသက်ရှူခြင်းကို ဘယ်အချက်တွေက သက်ရောက်မှုရှိသလဲ?
စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ပူပန်မှု၊ ဒေါသထွက်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ တခြားစိတ်ခံစားချက်တွေကြောင့် အသက်ရှူတာ ပုံမှန်ထက် မြန်လာတတ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေချိန်ဆိုရင်တော့ အသက်ရှူတာ ပိုနှေးပြီး ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
>> အသက်ပြင်းပြင်းရှူလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းက ဘာအတွက်ကောင်းပါသလဲ?
အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းရှူထုတ်ပြုလုပ်ခြင်းဟာ လူကို ပြေလျော့စေပြီး ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကို ကောင်းစေကာ သွေးပေါင်ကိုတောင် ကျစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
>> ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်သင့်သလဲ?
စိတ်ဖိစီးတဲ့အခါ၊ စိတ်ပူပန်တဲ့အခါ၊ စိတ်လျှော့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်လိုတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် ကျောင်းစာမေးပွဲဖြေခါနီး စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ရင် အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ခြင်းက စိတ်ကို ပြေလျော့စေပြီးတော့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ကောင်းစေနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ အဆင်မပြေလာတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပေးခြင်းက စိတ်ကို သက်သာငြိမ်သက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆေးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုခု လုပ်ရတော့မယ့်အချိန်မျိုး၊ ဥပမာအားဖြင့် သွေးဖောက်ရမယ့်အချိန်မျိုးမှာလည်း ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းရှူထုတ်ခြင်းဟာ စိတ်ကို အေးချမ်းစေပြီး လိုက်လုပ်ရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ စိတ်ပူပန်တိုင်း၊ စိတ်တင်းကြပ်တိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
>> အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို ဘယ်လိုသင်ယူရမလဲ?
ဆရာမတွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ လူမှူဖူလူံရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ စိတ်ပညာရှင်တွေကနေ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းဟာ ယောဂတို့၊ တရားထိုင်တာတို့နဲ့လည်း ဆက်စပ်နေတာမို့ ဒီပညာရပ်တွေမှာ ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီကနေလည်း သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
>> အချိန်မရဘူးဆိုရင်ရော ဒီလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နိုင်ပါ့မလား?
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး လုပ်နိုင်ပြီး အချိန်တိုတို၊ ကြာကြာ ကြိုက်သလောက် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလို ဘာပစ္စည်းကိရိယာမှမလိုတဲ့အတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
>> အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းတစ်ခုက မျက်စိကိုမှိတ်လိုက်ပြီး ကမ်းခြေလိုမျိုး စိတ်အပန်းပြေစေတဲ့ တစ်နေရာရာကို ရောက်နေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်မှန်းလိုက်ပါ။ အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူသွင်းလိုက်ပြီး ၁၀ အထိ ရေတွက်လိုက်ပါ။ ပါးစပ်ကနေတစ်ဆင့် လေတွေ အကုန်ကုန်သွားတဲ့အထိ ရှူထုတ်လိုက်ပါ။ ဒီနည်းအတိုင်း တစ်ကျော့ပြန်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
>> အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့ -
● ကိုယ့်ကို နှောင့်ယှက်မယ့်လူမရှိမယ့် အေးဆေးငြိမ်သက်တဲ့တစ်နေရာကို ရွေးပါ။
● သက်သောင့်သက်သာရှိမယ့်တစ်နေရာရာမှာ ကျောကို ဖြောင့်နေအောင်ထားပြီး ထိုင်/လှဲလိုက်ပါ။
● မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီး စိတ်တွေပြေလျော့စေတဲ့ တစ်နေရာရာကို စိတ်မှန်းလိုက်ပါ။
● နှာခေါင်းကနေ အသက်ရှူသွင်း၊ ပါးစပ်ကနေ အသက်ရှူထုတ်တာကို ထိုင်တာဖြစ်စေ၊ မတ်တပ်ရပ်တာဖြစ်စေ ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
● နှာခေါင်းကနေ အသက်ရှူသွင်းပြီး ဗိုက်ကြွက်သားတွေကိုသုံးကာ ပါးစပ်ကနေ ပြန်ရှူထုတ်လိုက်ပါ။
● အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှူသွင်းပါ။ ၁၀ စက္ကန့်လောက် ကြာနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းထဲမှာ ၁၀ အထိ ရေတွက်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ၁၀ စက္ကန့်လောက်ကြာအောင် ပြန်ရှူထုတ်ပါ။
● နေ့စဉ် တစ်နေ့ကို ၅/၁၀ မိနစ်လောက် အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းကို လေ့ကျင်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ထားခြင်းဖြင့် တကယ်စိတ်ဖိစီးမှု များလာတဲ့အခါ ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ပြီး စိတ်ငြိမ်သက်မှုကို ရလာမှာပါ။